Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na -ebubata ya DeepFast
Nhazi maka ROP dị elu na -egwupụta usoro miri emi ma sie ike, PDC bit bit na -eme ihe site na ala ruo ala ozugbo na obere ma ọ bụ ọbụlagodi otu ọsọ, na -azọpụta nnukwu oge ịkụ na ọnụ ahịa.
Ọ dịtụ iche site na bit tricone, PDC bit bit na -eji obere WOB mana RPM dị elu, yabụ na ọ na -arụkarị ọrụ na moto downhole iji bulie ọsọ na -agbagharị.
Arụ ọrụ nke PDC bit bit na -adabere nke ukwuu na ndị na -egbutu PDC, anyị na -enye azịza pụrụ iche maka ihe achọrọ akọwapụtara n'ụdị dị iche iche.
Diamond Bit gbara agba nwere eriri ezé nke nwere ROP dị elu na nhazi mmekọrịta plastik siri ike ma sie ike.
Nzube ezubere iche:Ọ nwere imewe pụrụ iche maka ike mkpakọ dị elu na nhazi abrasive. Ọ dị mma maka nnukwu shale na sagles na okwute, na quartz na okwute nwere nnukwu abrasiveness, apịtị apịtị na eriri aja jikọtara ọnụ dabara adaba.
Ọdịdị cone dị n'ime: Geometry pụrụ iche na nhazi nke cone nke bit bit na -eme ka arụmọrụ mbelata dị n'etiti etiti mkpọtụ iji gbatịkwuo ndụ nke bit bit.
Usoro matriks pụrụ iche: Usoro nke matriks ntụ ntụ nwere ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya na teknụzụ na -akụda mmụọ dị elu emewo ka akụrụngwa nke matriks rute n'ọkwa dị elu nke mba ụwa.
Ọdịdị ọwa mmiri sara mbara ma dị omimi: Ọwa radial dị obosara na nke miri emi na -aba uru maka nhicha na njem nke ịkpụ ma na -egbochi ịgba bọọlụ.
1. Ọdịdị cone dị n'ime: Cone dị n'ime nke bit na -ewere ọdịdị na okirikiri jiometrị pụrụ iche, nke na -eme ka arụmọrụ mbelata nke akụkụ nke bit ahụ dịkwuo ogologo ma mee ka ndụ bit ahụ dịkwuo ogologo.
2. Ọdịdị sara mbara ma dị omimi: Radial sara mbara na onye na -agba ọsọ miri emi, nke dịkwa mma maka nhicha na mmegharị nke ịkpụ na igbochi mgbochi apịtị apịtị.
3. Nchekwa dayameta kwụsiri ike: Mgbatị ogologo na dayameta nke oghere mwepụ nke mgbawa miri emi na imewe nke ịkpụ ezé nwere oghere mgbawa nwere ike ịmalite.
1. Matriks jikọtara ya na ngalaba diamond site na ndenye ọgwụ pụrụ iche iji kwekọọ n'ụdị, na -eme ka mbelata diamond, ike nrapado na iyi mgbochi iji nweta ROP ka mma.
2. Hydraulic kacha mma
Ihe nrụpụta bit ọ bụla etinyere n'ime ya na-enweta nyocha siri ike na-eme ka mmiri nwee ike hụ na ewepụchagharị na ịghagharị mkpụrụ osisi.
Bọtị anyị gbabiri agbagọ nwere ike ịkụnye usoro site na nro ruo ike.
3.Bits nwere akwa mejupụtara mejupụtara ngwakọta pụrụ iche nke ntụ ntụ diamond nke nha na alloy dị iche iche. Enwere ike ịhazi ngwakọta ngwakọta maka olulu n'ụdị dị iche iche.
Bit dị ime nwere arụmọrụ dị elu maka Turbine Xiwang Oilfield
Nkịtị PDC Bits na Tricone
Bits enweghị ike ịme ọmarịcha arụmọrụ n'ụdị siri ike nke ukwuu mgbe Limestone na Dolomites
Iji nweta nnukwu arụmọrụ, imepụta ime mmụọ siri ike wusiri ike Bit 8 1/2 ”DI705 itinye akwụkwọ maka turbine.
Na mkpokọta eserese nke 103. ngụkọta oge bụ ihe dị ka elekere 37. 5, na ROP bụ 2.75.
N'ime ọdụ ụgbọ mmiri Xiwang dị na China, nhazi ahụ siri ezigbo ike nke bụ limestone/dolomites na ike mkpakọ bụ 24000PSI -32000PSI. A chọrọ ka onye na -arụ ọrụ jiri turbine gwuo oghere 8 1/2 ”. PDC Bit ma ọ bụ Tricone Bit emeghị nke ọma na ngalaba dị otú a. Dabere na ọnọdụ a, Deefast na -enye Bit Impregnated Bit (8 1/2 ”DI705) iji tinye turbine ma nweta nnukwu ebumnuche.
2. Drilling parameters:
Nrụgide mgbali/ ịdị arọ naBit 40-50KN
Ọsọ Rotary 65 nkeji
Ọnụego ya 29L/S
Nrụgide mgbapụta 15 Mpa
Bit ahụ etinyere n'ime (8 1/2 "D1705) bụ ihe ọhụrụ emebere nke ọma maka ịhazigharị turbine na nhazi siri ike.
Site na ihe owuwu cone pụrụ iche na ahụ matriks siri ike, ọ meela ka ike na nkwụsi ike nke mkpọpu ala dị na lithology abrasive. Site na nchịkọta mkpokọta nke 103, ngụkọta oge bụ ihe dị ka awa 37.5, na ROP bụ mita 2.75/elekere. Onye ahịa ahụ nwere afọ ojuju maka arụmọrụ ya ma nyere aka ịchekwa oge 30% yana ihe dị ka 50% na -atụnyere ihe ngwọta gara aga.
Nke gara aga: Drill Bit nke gbara ime
Osote: Steel Body PDC Bi-center Drill Bit
Ndị na -emepụta bit Drill
Onye na -eweta bit Drill